Entana vidina amin`ny internet Mihamaro ny mpanjifa azy
Manomboka mahazo vahana ny “livraison à domicile” amin` izao fotoana izao. Taorian` ny fiparitahan` ny COVID-19 eto amintsika mitombo isa hatrany ireo mpanjifa no misafidy io fomba fiasa io mba tsy hivoahana ny trano.
Eo ny fisorohana ny filaharam-be eny an-tsena satria maro ireo olona no manao tahirin-tsakafo. Eo ihany koa ny fanajàna ny fepetra noraisin` ny fanjakana amin`ny fametrahana fahamehana ara-pahasalamana. Maro sahady ireo mpanjifan` ny Pho Resto, orinasa iray miezaka manampy sy manala fahasahiranana ny mpanjifa amin’ny fandrahoan-tsakafo matsiro sy vetivety, miaraka amin’ireo mpahandro matihanina, no misafidy an` ity fomba fiasa ity. Tsotra tokoa ny fiaraha-miasa amin` ireny orinasa manao « livraison à domicile » ireny satria tsy be filirony. Mijery ireo tolotra amin` ny tranokalan` ny orinasa. Miantso ianao raha misy karazan-tsakafo na koa entana ilaina andavan`andro tianao haroso ho an’ny ankohonanao. Mandray ny kaomandy ny orinasa no sady maka ny adiresy hanaterana ireo entana. Mandalo avy hatrany any an-dakozia iny kaomandy iny ary raisin’ny mpanao sakafo. Fotoana tsy ela aorian’izay dia efa vonona ny sakafo ary aterin’ireo “livreurs”. Miantso an-telefaonina indray ity farany rehefa tonga any amin’ilay toerana, izay vao mandoa vola ny mpanjifa na koa misafidy ny “money banking”. Amin` ny ankapobeany dia hatramin’ny 2.000 Ariary monja ny saram-panaterana ny sakafo raha eto Antananarivo Renivohitra fa kosa miankina amin` ny toerana ihany io sarany io. Misy ihany moa ireo olona miantso mananihany indraindray, fa tsy tena hividy akory. Fotoana kosa izao hahafahana manaraka ny fivoaran` ny teknolojia izay antoky ny fahombiazan` ny firenena matanjaka maro.